दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ९ गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २६ - Sutra TV Sutra TV
मेष : आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने मुद्दाहरूबाट बच्नको लागि तपाईंले नै धेरै प्रयास गर्न सक्नु हुनेछ। यो तपाईंको प्रेमी जीवनमा एउटा अचम्मको दिन हुने छ। तपाईंको व्यापारिक भावना र बातचीत गर्ने क्षमताले फाइदा दिनेछ। तपाईंको हास्यपूर्ण चरित्र तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै नै रोमाञ्चक केही गर्नु हुनेछ।
वृष : स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ, उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ, वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन। प्रेमले एक ठाउँमा उभिए तापनि तपाईंलाई नयाँ संसारमा घुमाउन सक्छ। यो तपाईं रोमान्टिक यात्रामा जाने दिन हो। आज, तपाईंलाई आफ्नो मालिक सधैं तपाईंसँग किन यति अशिष्ट छ भन्ने सत्य थाहा हुनेछ। यसले तपाईंलाई साँच्चै नै राम्रो लाग्नेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै रमाइलो साँझ बिताउन सक्नु हुनेछ।
मिथुन : अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस्, तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईं सबै परिवारका उल्लेखनीय ऋणहरू तिर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आकाश चम्किलो देखिन्छ, फूलहरू अझै रंगीन जस्तो लाग्छ, र सबै नै तपाईं वरिपरि प्रकाशित हुनेछ, किनभने तपाईंलाई प्रेम भएको छ, आज तपाईंसँग शक्ति रहनेछ र आफ्नो कमाउने शक्ति कसरी जुटाउने भन्ने थाहा हुनेछ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। विवाहको मामलामा आज तपाईंको जीवन साँच्चै नै रमाइलो देखिन्छ।
कर्कट : तपाईंका बाल्यकालका सम्झनाहरुले तपाईंलाई संलग्न गर्नेछन्। यस प्रकृयामा तपाईंले आफैलाई अनावश्यक मानसिक तनाउ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंमा कहिलेकाहीं बालकजस्तो हुन सक्ने क्षमता नभएकोले तपाईंको एउटा प्रमुख चिन्ता र तनाउ बढी रहन्छ। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। आफ्ना व्यक्तिगत समस्याको समाधानको लागि कुनै मित्रले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छ। तपाईं आफ्नो कल गर्ने देरी गरेर आफ्नो प्रेमी साथीलाई जिस्क्याउनु हुनेछ। आईटी पेशावरहरूलाई आफ्नो उत्साह प्रमाणित गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ। तपाईंले सफलता हासिल गर्न एकाग्रता राख्नुपर्छ र निरन्तर बढि नै काम गर्न आवश्यक छ। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आफ्नो छिमेकीले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा समस्या बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसले तपाईंहरूको प्रेमको बन्धन हल्लाउन गाह्रो छ।
सिंह : अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यले केही चिन्ता गराउँछ। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। तपाईंको कामको पर्यावरण आज राम्रो कार्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
कन्या : असुरक्षा, अभिमुखीकरण हीनताको भावनाले चक्कर आउन सक्छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। यात्राले तत्काल परिणाम ल्याउने छैन तर भविष्यमा लाभको लागि राम्रो जग बसाउनेछ। गलत सञ्चारले आज केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ, तर तपाईंले यसलाई बसेर बातचीत गरेर समाधान गर्न सक्नु हुनेछ।
तुला : आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। एउटा रमाइलो जीवनसाथी हुँदा तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भनेर आज थाहा पाउनु हुनेछ।
वृश्चिक : आज तनाव मुक्त, शान्त रहनुहोस्। तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। आज साँझ जिस्क्याउने कार्यमा नलाग्नुहोस्। महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय गर्दा अरूको दबाबमा नआउनुहोस्। तपाईंको तेज अवलोकनले अरूको अगाडि पुग्ने मद्दत गर्नेछ। आफ्नो साथीको आलस्यले आज धेरै कार्यहरुमा बाधा पर्न सक्छ।
धनु : स्व-सुधार परियोजनाहरूले धेरै प्रकारको फाइदा हुनेछ, तपाईंले आफ्नो बारेमा राम्रो र विश्वस्त महसुस गर्नुहुनेछ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं पार्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना राम्रा मित्रहरूलाई निमन्त्रण गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईंको जयकार गर्ने धेरै मान्छे हुनेछन्। आज केही प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा तपाईं चकाचौंद हुने सम्भावना छ। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
मकर : मोतीबिन्दुका विरामीहरुले प्रदूषित वातावरणमा जानु हुँदैन किनकि धूम्रपानले तपाईंको आँखालाई धेरै क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यदि सम्भव छ भने घाममा धेर नहेर्नुहोस्। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। तपाईंको झ्यालमा फूल राखेर आफ्नो प्रेम देखाउनुहोस्। तपाईं प्रभावशाली मान्छेको छेउछाउमा हिंडीरहनु भयो भने तपाईंले आफ्नो क्यारियरमा ठूलो उन्नति गर्नु हुनेछ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। आज तपाईंले र तपाईंको जोडीले आफ्नो वैवाहिक जीवनको उत्तम स्मृति सिर्जना गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो के हो भन्ने मात्र तपाईंलाई थाहा छ, त्यसैले बलियो र साहसी भएर र छिट्टै निर्णय लिनुहोस् र परिणामसँग बस्नुहोस्। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। आज तपाईंलाई प्रेमको वरदान प्राप्त हुने देखिन्छ। तपाईंको व्यापारिक भावना र बातचीत गर्ने क्षमताले फाइदा दिनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई साँच्चै विशेष केही किनिदिन सक्छन्।
मीन : तपाईंले लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको जीवनका तनाउ र खिचलोबाट राहत प्राप्त गर्नु हुनेछ। यिनीहरूलाई स्थायी रूपमा निकाल्न तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने सही समय हो। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। आज तपाईंलाई लाभ हुनेछ, किनकि परिवारका सदस्यहरूले सकारात्मक ढंगमा प्रतिक्रिया गर्नेछन्। प्रेमयुक्त जीवनले आशा ल्याउँछ। तपाईंले गरेका कार्यबाट कसैलाई फाइदा लिन नदिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आज आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई एउटी परीले झै अतिरिक्त हेरचाह गर्नेछन्।